Waa ayo Dadka la yidhaahdo Hindida cas-cas – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Waa ayo Dadka la yidhaahdo Hindida cas-cas
Hindida cas-cas waa dadkii asal ahaan iska lahaa dhulka Maraykanka, waxaana lagu tilmaamaa dad dhaqan oo aan aad uga horumarin caadooyinkoodii asalka ahaa, gaar ahaan kuwa deggen dhulka baadiyaha.Beel ka mid ah ayaa u tagtay hoggaamiyihii deegaanka, waxa aanay weydiiyeen odoroska cimilada jiilaalka foodda ku soo hayey?
Hoggaamiyihii isaga oo ka baqaya in uu qirto in aanu xog haynin si aanay uga hor iman, ayaa uu u sheegay in qabow badani sannadkaas jiri doono. Waxa aanu iskaga mashquuliyey talo ah in ay xaabo badan urursadaan inta aanu barafku bilaabmin, si ay uga shitaan dab ay dugsadaan.Beshii oo amarkiisa fulinaysa ayaa keynta xaabaysi ugu dhaqaaqday.
Muddo kaddib, ayaa hoggaamiyihii ka warwaray in shaqada xaabo-gurka ee uu dadka u diray ay ceeb ku keento, haddii qabowgu badan waayo. Si uu u hubiyo ayuu u tegey masuulkii dawladda dhexe u qaabilsanaa saadaasha hawada. Masuulkiina waxa uu soo sheegay in qabowgu sannadkaas aad u badan yahay.
Hoggaamiyihii oo ku faraxsan in warkiisii hore rumoobay ayaa beeshii ku soo noqday oo u sheegay in ay sii kordhiyaan xaabo urursiga, iyaguna sidii ayaa ay yeeleen.Mar kale iyo mar saddexaad, ayuu hoggaamiyihii masuulkii saadaasha cimilada ku noqday si uu haddana u hubiyo in wax is beddeleen. Mar kasta jawaabta uu ka helayey waxa ay ahayd in qabow sidii hore ka sii darani uu soo socdo, isna beesha waxa uu farayey in sidii hore si ka badan ay u xaabaystaan.
hoggaamiyihii Hindida cas-cas waxaa yaab ku noqotay digniintan masuulka saadaasha cimilada ee mar kasta oo uu u tago ka sii daraysa. Markii afaraad, ayaa uu weydiiyey, waxa lagu gartay in qabowgu sannadkan xad dhaaf aan caadi ahayn noqon doono iyo sababta loo malaynayo?Halkii wax kale uu ka filayey ayuu masuulkii saadaasha hawadu ku jawaabay,
“Waxaa laga qiyaas qaatay qabiilka Hindida cas-cas oo sannadkan muddo bilo ah si waalliya xaabo u urursanayey, iyaga ayaa la filayaa in dhaqan ahaan ay leeyihiin hab ay ku sii ogaadeen”!!!.Ma kulatahay in masuuliyiinteenna qaarkood sidaas yihiin oo waxa ay innaga arkaan uun war inooga dhigaan?
Previous articleXisbiga wadani oo Eryey laba xubnood
Next articleCiidamadii hawl gabka Noqday oo ku baaqay in dib loo hawl galinay Itoobiya
Ciidamada Somalia oo Sheegtey iney Al-shabaab ku laayay Gobalka Hiiraan .
Faah Faahin:-Dil Ka Dhacay Xaafad Ka Tirsan Magaalada Muqdisho